Ploitical – Page2– Thadin Media
KNLA တပ်​ မဟာ ၅ လူ သစ်​ အသဲ အသန်​ လိုက် ​စု ​နေ
[Zawgyi] KNLA တပ်​မဟာ ၅ လူသစ်​ အသဲအသန်​ လိုက်​စု​နေ ဝါသိုးခို ၁၅-၃-၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ခုနှစ်​ ​မတ်​လ ၁၃ ရက်​​နေ့တွင်​ KNLA တပ်​မဟာ ၅မှ ​လေးဖိုး​ကျေးနယ်​ ကာကွယ်​​ရေးမှူးအဆင့်​ရှိ ဖားဒါလယ်​ တပ်​ရင်း ၁၀၂ တပ်​ခွဲ၃ မှ တပ်​စုမှူးအဆင့်​ရှိ ​ကျော်​ထူး ဦးစီး အင်​အား ၇ ဦးခန့်​သည်​ ​ရေပူ​ကျေးရွာမှ ရပ်​မိရပ်​ဖ ၁၅ ဦးအား ​ခေါ်ယူ​တွေ့ဆုံ ပြီး တပ်​သားသစ်​ ​တောင်းခံ…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး အကြမ်းဖက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် ဆစ်ဒနီမြို့လုံခြုံရေးကို အထူးတိုးမြှင့်ချထားမည်
[Zawgyi] နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျထိပ်သီးအစည်းအဝေးကာလအတွင်း အကြမ်းဖက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အတွက် လုံခြုံရေးအထူးတိုးမြှင့်ချထားမည်ဖြစ်ကြောင်း The Daily Telegraph Sydney သတင်းစာက ဖော်ပြသည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် ကျင်းပမည့် အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင် များနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၁၇ ရက်နှင့် ၁၈ ရက်တွင် တက်ရောက် လာမည့် ခေါင်းဆောင်အသီးသီးအား သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် Malcolm Turnbull က လက်ခံကြိုဆို မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို…
ကရင် စစ်သား တစ်ဦး ရေးတဲ့ စာပါ ဖတ်ကြည့်ကြပါ … တိုင်းရင်းသားတို့ အထူး သဖြင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ များများ ဖတ်ပါ
[Zawgyi] ကျုပ်​တို့ ကရင်​ကပြတ်​သားတယ်​….. မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ပထမဆုံး ​တော်​လှန်​ခဲ့တဲ့လက်​နက်​ကိုင်​အဖွဲ့ဖြစ်​သလို့. စစ်​​ရေး​အောင်​မြင်​မှုကလဲ အင်းစိန်​၊ မန္တလး၊ ​မေမြို့ ထိစစ်​​ရေး​အောင်​မြင်​ခဲ့ပါတယ်​…… အောင်​မြင်​တဲ့အ​ကြောင်းရင်း​တွေလဲရှိခဲ့တယ်​​လေ..အဲအ ချိန်​ခါက. သမ္မတက မန်းဝင်း​မောင်​၊ စစ်​ဦးစီးက. ​ ဗိုလ်​ချုပ်​​စောစမစ်​ထွန်းကိုးဗျ … အမှန်​​ပြောရင် ဗမာ​သေနတ်​ကိုင်​တပ်​ရင်း​တွေကို အင်​အား​လျော့ချခဲ့ တယ်​…လက်​နက်​ကြီးတပ်​ သံချပ်​ကာတပ်​.​တွေအများဆုံး…..က​တော့ ကရင်​​တွေပါ….. အဲအချိန်​မှာ…ရခိုင်​မှာ …ဘင်​ဂလီအ​ရေးစဖြစ်တယ်​ … ဗမာ​သေနတ်​ကိုင်​တပ်​ရင်း ၆ခုထဲက. တပ်​ရင်း ၅. က တာဝန်​ယူတိုက်​ခိုက်​တယ်​ …တပ်​ရင်း ၃. က​ တောခိုတယ်​ .. ကျန်​တပ်​အများဆုံးရှိမှ…
[Zawgyi] ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ငြိမ်သက်သွားပေမဲ့ အစိုးရတပ်မတော်ဖက်က ရှေ့ဆက်တိုးလာရင် တင်းမာမှုတွေ ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ရဲ့ ဖာပွန်ခရိုင်ဥက္ကဌက ပြောဆိုပါတယ်။ KNU ဗဟိုကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားဖို့ သဘောထားရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အကြားမှာ ဒီလ ၅ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီး တိုက်ပွဲငယ်တွေ ကြိုးကြားဖြစ်ပွားခဲ့ ခုရက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ငြိမ်သက်သွားပေမဲ့…
RCSS/SSAအဖွဲ့နှင့်​ TNLAတို့ တိုက်​ပွဲများဖြစ်​ပွားပြီး လက်​နက်​ကြီးဗုံးသီး ရွာထဲကျ​ရောက်​​ပေါက်​ကွဲ
[Zawgyi] ​ကျောက်​မဲမြို့ နယ်​၊ ​တော့ဖယ်​​ကျေးရွာ၏ အ​ရှေ့ဘက်​ ၄ဖာလုံတွင်​ RCSS/SSAနှင့်​ TNLAတို့ မတ်​လ ၁၄ရက်​​နေ့ နံနက်​ ၆နာရီက တိုက်​ပွဲများ ဖြစ်​ပွားခဲ့ရာ လက်​နက်​ကြီးဗုံးသီးများ ​တော့ဖယ်​​ကျေးရွာအတွင်း ကျ​ရောက်​​ပေါက်​ကွဲခဲ့၍ ​နေအိမ်​တစ်​လုံး ထိခိုက်​ပျက်​စီးခဲ့ပြီး ​ဒေသခံ ၃ဦး ​သေဆုံးခဲ့​ကြောင်း သိရသည်​။ နှစ်​ဖက်​ရင်​ဆိုင်​တိုက်​ပွဲများ​ကြောင့် လက်​နက်​ကြီးဗုံးသီးကျ​ရောက်​ခဲ့ရာ ​တော့ဖယ်​​ကျေးရွာရှိ ​ဒေါ်​အေးမတ်​၊ ​ဒေါ်​အေးကျွမ်း ကွန်​​ကော်​​ကျေးရွာ​နေ ဦးသိန်းဟန်​တို့ ၃ဦး ​သေဆုံးခဲ့သည်​။ ​သေဆုံးခဲ့သူများအား မတ်​လ ၁၄ရက်​၊ ​နေ့လည်​ ၂နာရီခွဲတွင်​ ​ကျေးရွာအုပ်​ချုပ်​​ရေးအဖွဲ့ဝင်​များနှင့်​ ရပ်​မိရပ်​ဖများက ​သင်္ဂြို…
ပိတ်​ချင် သ​လောက်​ ပိတ်​ ဂ ရု မ စိုက် ​​သော မြန်​မာ
[Zawgyi] ​USA အ​မေရိကန်​နှင့်​ အင်္ဂလန်​အပါအဝင်​ အ​နောက်​အုပ်​စု ကုလ၊ UN. OIC UAE. စသည်​ နိုင်​ငံများနှင့်​ ယုတ်​မာ​ကောက်​ကျစ်​​သော ကုလား ဩဇာခံ အဖွဲ့အစည်းများကို ဟိုလွန်​ခဲ့​သော နှစ်​​ပေါင်းများစွာကတည်းက ပြည်​​ထောင်​စု မြန်​မာနိုင်​ငံ ကြီးသည်​ ​စောက်​ဂရုကိုမစိုက်​တာပါ၊ အ​ရေးယူ အ​လေးမူ​သော အ​နောက်​​မျှော်​ နိုင်​ငံ​ရေးသမားများသည်​ လည်း မြန်​မာပြည်​ကြီးတွင်​ ကြာရှည်​မရပ်​တည်​နိုင်​ပါဘူး ဘာ​ကြောင့်​လဲဆိုရင်​ ယခုပြည်​တွင်း/ပြည်​ပ သတင်း များကို​နေစဉ့်​ ကြားသိ​နေရ၍ သုံးသပ်မိပါသည်​။ မြန်​မာနိုင်​ငံ စစ်​​ရေးအ​ခြေအ​နေကိုကြည်​ပါ ပြီးခဲ့​သော ​အောက်​တိုဘာလက အ​မေရိကန်​သည်​ အစ္စ​ရေးနိုင်​ငံအား…